Etu esi wunye Android O na pixel na Nexus dakọtara Akụkọ akụrụngwa
Etu esi wunye Android O na Pixel na Nexus dakọtara
O meela awa ole na ole kemgbe Google I / O nke afọ a agwụla, otu n'ime ozi kachasị atụ anya na ihe omume a bụ mmalite nke ụdị nsụgharị nke gam akporo. N'okwu a, anyị amaworị na Google O ga-ebido ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ụdị ọhụrụ a na ngwaọrụ gị, naanị ị ga-ahụ na ọ dakọtara. Maka ugbu a enweghi ọtụtụ ngwaọrụ dakọtara na anyị amatala na Google na-ebupụta ụdị sistemụ arụmọrụ maka smartphones ha ma ọ bụrụ na ị nwere Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5X ma ọ bụ Nexus 6P, ị nọ n'udo, na ma ọ bụghị na ị ga-echere onye maara ego ole ...
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịnwale budata ma wụnye nsụgharị ọhụrụ site na OTA. Nke a nwere ike ịdị nfe karịa ịwụnye ụdị ahụ na aka site na-egbu maramara ngwaọrụ ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ụdị nyocha nke onye nrụpụta mbụ ọ dị nfe dịka ịnweta ntọala ntọala> mmelite na ịlele na ị nwere mmelite dị njikere ibudata.
Ma ọ bụghị ya ma ọ bụrụ na ịnweghị ụdị OTA (ikpe na-adịghị ahụkebe na ngwaọrụ ndị a dakọtara) ị nwere ike ichere ka ọ bịarute ma ọ bụ naanị melite ngwaọrụ ahụ n'ike site na-egbu maramara. Iji mee nke a, ị ga-agbaso usoro ndị anyị ga-ahapụ gị n'okpuru ma na-eburu n'uche mgbe niile na mbipute achọrọ iji mepụta mmelite a bụ gam akporo Nougat.
Anyị na-ebudata onyonyo a na peeji Google
Anyị jikọọ smartphone na USB wee pịa (na) bọtịnụ ike na vol +
Anyị na-emeghe windo iwu na PC ma pịnye: adb reboot bootloader soro ya fastboot oem Ị kpọghee ekwt
A ga-emeghe bootloader ma kpochapụ data gị niile
Anyị na-eme faịlụ ebudatara na mbido: flash-niile
Cheta na ihe usoro a na-egbu maramara na-eme bụ hichapụ ngwaọrụ gị kpamkpam ịhapụ ya n'enweghị data, ya mere, ọ dị mkpa na ị nwere nkwado ndabere nke ama niile ka ị ghara ida ihe ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe n'okwu a, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ichere maka mbipụta OTA na melite mgbe ọ bịarutere iji zere mmebi nke ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Etu esi wunye Android O na Pixel na Nexus dakọtara
HP ewepụtala kọmputa mbụ nke ga-abata na Mars
Nke a bụ ihe niile sitere n'aka gam akporo O